अपांगले खुट्टाले बनाएको आफ्नो चित्र अमिताभ बच्चनले ५० हजारमा किने – " सुलभ खबर "
अपांगले खुट्टाले बनाएको आफ्नो चित्र अमिताभ बच्चनले ५० हजारमा किने
मुम्बइ। अपांग आयुष कुंडलले आफ्नो खट्टाले अमिताभ बच्चनको चित्र बनाएर ट्वीट गरे । अमिताभ यो देखेर यति खुसी भए पनि आयुष र पूरै परिवारलाई आफ्नो खर्चमा मुम्बइ बोलाए ।
आधा घण्टाको कुराकानीपनि उनले आयुषसँग उनको इच्छा सोधे । आयुषले इशारा गरेर बताए । अमिताभले बुझ्न नसकेपछि उनकी आमाले उनी कौन बनेगा करोडपतिको हट सिटमा बस्न चाहेको बताइन् । त्यसपछि अमिताभले उनलाई कौन बनेगा करोडपतिको सिजन १२ मा
अतिथि बनाउने बताए ।आयुषले साथमा अमिताभको चित्र पनि लिएर गएका थिए जसलाई अमिताभले ५० हजारमा किने । आयुषले अमिताभको चित्र कौन बनेगा करोडपति वाला लुकमा बनाएका थिए ।
FB 2607 – My honour and my absolute affection for this .. I will be meeting him soon @aayush_kundal #AyushKundal ?✌ he makes paintings with his feet ??
Posted by Amitabh Bachchan on Saturday, January 11, 2020
यो पनि कोरोनाभाइरसको त्रासले ७ हजार जनालाई पानीजहाजमै थुनियो
कोस्टा क्रोसिएरे कम्पनीको जहाज कोस्टा स्मेराल्डा २५ जनवरीमा उत्तर पश्चिम इटलीको पोर्ट अफ साभोनाबाट हिँडेको थियो । शंका गरिएकी बिरामी, ५४ वर्षकी चिनियाँ महिला त्यहीँबाट जहाज चढेकी थिइन् । साभोनाबाट हिँडेको कोस्टा स्मेराल्डा फ्रान्सको मार्सेइले, स्पेनको बार्सिलोना, स्पेनकै पाल्मा टापु हुँदै इटलीको सिभिटाभेसिला पुगेको थियो । यहाँ ती महिलालाई फ्लुजस्तै लक्षण देखिएपछि उनलाई उनका पार्टनरसहित क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो ।